Kulan Talo-wadaag - National Civil Service Commission
Muqdisho-06/02/2019: Agaasimaha Guud ee Guddiga Qaranka Shaqaalaha Rayidka Dowladda, Md, Abdinasir Shiekh Mire iyo La-taliye sare ee arrimaha dib-u-habeynta shaqaalaha rayidka ee Dowladda, Md, Abdiweli Xassan Maxamed ayaa waxaa ay ka qeyb galeen shir looga hadlayay sare u qaadista wax-qabadka hay’adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Shirkaan oo ka dhacay xarunta Hangarta ee u dhow Iskuul Buliisiya ayaa waxaa kasoo qeyb galay madax kala duwan oo ka kala socotay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, Dowlad Gobolleedyada Dalka, Midowga Yurub, Baanka Adduunka iyo Hay’ado kale oo caalami ah. Shirka waxaa si wada-jir ah u guddoominayay saraakiil ka socotay Xafiiska Raysul Wasaaraha Soomaaliya iyo Midowga Yurub. Shirkaan ayaa ahaa mid iswareysi ah, dabana socday kulamo hore oo looga hadlay isla mowduucaan. Ka soo qeyb galayaashii shirka ayaa waxaa loo kala qeybiyay guddiyo, guddi walbo waxaa uu diiradda saarayay hawlaha quseeya guddi ahaam.
Agaasimaha Guud ee Guddiga Qaranka Shaqaalaha Rayidka Dowladda FS ayaa sidoo kale waxaa uu shir guddoomiyay shir-doceedka guddiga u xilsaaran ka shaqeeynta iyo hagaajinta Maamulka iyo Maareynta Maaliyadda Dalka (PFM). Waxaana kasoo wada qeyb galay dhammaan guddiyo ka kala socday Dowlad Gobolleedyada Dalka, sida Puntland, Jubbaland, Koofur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug. Waxaa si hoose loo lafa guray waxa ka qabsoomay hawlihii socday. Waxaa mid mid loo dhageystay soojeedinta guddiyadii ka kala socday Hay’adaha kala duwan ee dowladda. Sidoo kale, Agaasimaha Guud ee Guddiga Qaranka Shaqaalaha Rayidka Dowladda iyo La-taliyaha sare ee arrimaha dib-u-habeynta shaqaalaha rayidka ee Dowladda ayaa waxa ay uga warbixiyeen meesha ay marayaan wadahadallada hawlihii mashruuca uu taageero Baanka Addunka ee tayeynta shaqalaha rayidka ee dowlada (CIM). Agaasimaha iyo La-taliyaha ayaa sheegay in wadahadallada mashruuca uu marayo meel fiican, mar dhowna ay ku rajo wayn yihiin in is-afgarad buuxa laga gaaro.
Ugu dambeyntii waxaa shirka soo wada xiray saraakiisha ka kala socotay Xafiiska Raysul Wasaaraha Soomaaliya iyo Midowga Yurub. Waxayna aad u bogaadiyeen hawlaha la qabtay, ayagoo sidoo kalena aad ula dar daarmay in la dar-dar geliyo hawlaha dhiman. Saraakiisha ka socotay Xafiiska Raysul Wasaaraha Soomaaliya ayaa aad ugu dheeraaday in masuuliyiinta iyo dhammaan shaqaalaha kala duwan ee dowladda looga baahan yahay dadaal dheer maadaama sannadka 2019 la rabo in la qabto shaqo badan. Sidoo kale, madaxdii ka kala socotay Midowga Yurub iyo Hay’adaha Caalamiga ah ayaa aad usoo dhaweeyay wax-qabadka muddadii koobnayd ee Dowladda, kulana dar daarmay masuuliyiinta kasoo qeyb gashay shirka in sannadda 2019 uu yahay sannad Soomaaliya laga doonayo wax badan inay u qabsoomto.